Cabitaanka Sumaynta Iyo Baakaynta
Cabitaanka Sumaynta Iyo Baakaynta Astaamaha iyo baakadaha waxa naqshadeeyay shirkadda maxalliga ah ee M - N Associates. Baakaduhu waxay ku dheelitiran yihiin isku-dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya da 'yarta iyo sinta laakiin sidoo kale xoogaa qurux badan. Astaanta silkscreen-ka cad waxay u egtahay mid ka soo horjeedda waxyaabaha midabka leh iyadoo kan cad loo yaqaan. Qaab-dhismeedka saddexagalka dhalada ayaa sifiican ugu amaahanaaya abuurista seddex qaybood oo kala duwan, mid astaan u ah labana macluumaad, gaar ahaan macluumaadka faahfaahsan ee geesaha wareega.
Khamiis 8 Bisha Afraad 2021
Baakadaha Biirka Fikradda ka dambaysa dib-u-habeyntaan ayaa ah in lagu muujiyo badeecada sare ee 'ABV' iyada oo loo sii marayo shey la arki karo oo la arki karo - birta dusha ka sameysan. Dhuxul bir ah oo wasakhaysan ayaa noqota mowjadda ugu weyn ee dhalada dhalada iyadoo ka dhigaysa mid dhib yar oo la qabsan karo. Qaabka sawirka ah ee u eg biraha dunta leh waxaa lagu wareejiyaa aluminium waxaa lagu buuxin karaa sumcadda astaan u leh calaamadaha jaantus iyo muuqaal casriye u ah ugaadhsade ka dhigaya naqshadeyn cusub mid aad u firfircoon. Xalka garaafka ee dhalada iyo wey fududahay oo si fudud loo hirgaliyo. Midabbo dhalaalaya iyo waxyaabo naqshadeysan oo cufan ayaa u xiiseeya dhagaystayaasha bartilmaameedka waxayna kordhiyaan aragga shelf.
Arbaco 7 Bisha Afraad 2021
Baakada Cabitaannada khamriga oo si wada jir ah loo abaabulay oo leh fikradda 'kala-diridda', Melting Stone wuxuu keenayaa qiimo gaar ah marka loo eego baakadaynta aalkolada dhaqameed. Halkii ay ka ahaan lahayd nidaamka furitaanka caadiga ah, Melting Stone waxaa loogu talagalay inay nafteeda baabi'iso markay la xiriireyso dusha heer-kul sare leh. Marka xirmada aalkolada lagu shubo biyo kulul, baakadda 'marble' naqshadeynta ayaa iskeed u baabi'i doonta iyada oo macmiilku diyaar u yahay in uu ku raaxeysto cabbitaanka asal ahaan u samaysan badeecadooda. Waa hab cusub oo loogu raaxeysto cabbitaannada khamriga iyo qadarinta qiimaha dhaqanka.
Talaado 6 Bisha Afraad 2021
Buug-Karinta Miiska qaxwaha ee cunnada Hungarianka 12-ka Bilaha, oo uu qorey qoraaga Eva Bezzegh, waxaa billaabmay Nofeembar 2017 Artbeet Publishing. Waa cinwaan farshaxan oo caan ah oo soo bandhigaya saladh xilliyeedyo muujinaya dhadhanka cuntooyin kala duwan oo adduunka oo dhan ah bishiiba mar. Cutubyada waxay raacayaan isbeddelada xilliyeed ee taarikadayada iyo dabeecadda sannadka oo dhan 360pp ee ku jira liiska cuntada sida xilliyada iyo cuntada u dhigma, muuqaalka maxalliga ah iyo sawirrada nolosha. Ka sokow noqoshada aruurinta mawduucyada udub dhexaadka u ah cunno waxay u ballanqaadeysaa waayo-aragnimo buugga buugaagta farshaxanka oo waarta.
Isniin 5 Bisha Afraad 2021
Baakadaha Qaxwaha Naqshadeynta ayaa muujineysa shan gacmeed oo kala duwan oo la soo sawiray, goos goos ah oo waxoogaa macquul ah ayaa wejiyada daanyeerka ah, mid walboo matalaya kafee ka duwan gobol kale. Madaxooda, koofiyad casri ah, koofiyad caadi ah. Muuqaalkooda khafiifka ah waxay ka dhigaan wax cajiib ah. Daanyeeradan casriga ah waxay tilmaamayaan tayo ahaan, qaab dhismeedkooda bir macaan ee cabitaanka cabitaanka qaxwada ee xiiseynaya sifooyinka dhadhanka adag. Muuqdahoodu waxay si muuqata u muujinayaan niyadda, laakiin waxay sidoo kale u jeedaan astaanta qaxwada qaxwaha, mid khafiif ah, xoog badan, dhanaan ama siman. Naqshadeynta ayaa ah mid fudud, laakiin si muuqata u xariifsan, qaxwaha mowjad kasta.
Axad 4 Bisha Afraad 2021
Galaaska Cognac Shaqada waxaa loogu talagalay cabitaanka cognac. Waxaa lagu afuufayaa istuudiyaha galaaska. Tani waxay ka dhigaysaa gabal kasta oo galaas ah shaqsi ahaan. Muraayaddu way fududahay in la qabsado waxayna u muuqataa mid xiise ka leh xaglaha oo dhan. Qaabka galaasku wuxuu ka tarjumayaa iftiinka ka yimid xaglo kala duwan oo ku daraya raaxo dheeri ah oo la cabbo. Iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkii jilicsanaa ee koobka, waxaad ku dhejin kartaa galaaska miiska sida aad jeceshahay inaad ku nasato labada dhinacba. Magaca iyo fikradda shaqadu waxay xustaa gabowga farshaxanka. Naqshaddu waxay ka tarjumaysaa heerka gabowga wuxuuna ku baaqayaa dhaqanka gabowga cognac inuu ku fiicnaado tayada.
The Curtain Xafiiska Iibku Axad 9 Bisha Shanaad
Stocker Kursi Sabti 8 Bisha Shanaad
Reflexio Mashruuca Qoraalku Jimco 7 Bisha Shanaad
Cabitaanka Sumaynta Iyo Baakaynta Baakadaha Biirka Baakada Buug-Karinta Baakadaha Qaxwaha Galaaska Cognac